युरोपमा कोभिड संक्रमण घट्दै, मापदण्ड खुकुलो पारिँदै :: Setopati
महेशकुमार खाती कोपनहेगन, वैशाख २८
मानिसहरुको चहलपहल बाक्लो हुँदै गएको छ। बजार बिस्तारै खुल्दै छन्। लामो समयदेखि बन्द रहेका बार/रेस्टुरेन्टहरुमा ग्राहकहरु छिर्न थालेका छन्। समुद्रीतट र पार्कहरुमा घाम ताप्नेहरुको ताँती लाग्न थालिसकेको छ।
झन्डै वर्षदिनदेखि ठप्प जस्तै रहेको युरोप विस्तारै खुल्दै गएको संकेत हो यो। अर्थात कोराना महामारीको संक्रमण दर घट्दो छ। उकुसमुकुस जनजीवन सामान्यतर्फ डोरिने आशा अंकुराएको छ।
गृष्मऋतु भएसँगै सकारात्मक संकेतहरू युरोपेली आकाशमा छाउँदै गरेको अनुभूत हुँदैछ। नेपालमा कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गर्दा झन्डै १ वर्ष थिलथिलो परेको युरोपमा भने घट्दै गएको छ। संक्रमणमा कमी आएसँगै युरोपका धेरै देशमा कोरोना नियन्त्रणका लागि कडा गरिएका मापदण्ड खुकुलो पारिँदै लगिएको छ।
कर्मभूमिमा आशाका किरणहरु उदाइरहँदा जन्मभूमि भने यतिबेला अशान्त छ। मापदण्ड कडिकडाउले देशै सुनशान हुदैछ। दिन दुई गुणा रात चौ गुणा झैं गरी कोभिड संक्रमण फैलँदै छ। मनमा कालो बादल छाइरहेको छ।
अप्रिलको अन्त्यबाट युरोपका विभिन्न देशमा उच्च सावधानी अपनाउँदै लकडाउन लगायत मापदण्डलाई खुकुलो पारिएको छ। भ्याक्सिन लगाउने अभियान पनि तीब्र पारिँदै लगिएको छ। कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो चरणपछि केही राहत मिलेको हो।
‘अहिले पोजिटिभ भाइब्स छ, समर सिजन सुरुसँगै अहिले युरोपमा कोभिडको संक्रमण दर घट्दो क्रममा छ,’ पोल्यान्डको सार्वजनिक राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवामा वरिष्ठ सल्लाहकार तथा विशेषज्ञ डा. उदयदेव आचार्यले भने, ‘युरोपका धेरै देशमा लकडाउन हटाइँदै छ, मापदण्ड पनि खुकुलो पारिएको छ।’
उनले कोभिडविरुद्ध मापदण्ड कडाइका साथ लागु गरिएको र भ्याक्सिन पनि तीब्र रुपमा लगाउन थालिएपछि संक्रमण दर घटेको जनाए। १ जना संक्रमितले अर्को स्वस्थ व्यक्तिलाई सार्ने सम्भावना अहिले कम्तीमा शून्य दशमलव ७ देखि बढीमा १ प्रतिशतसम्म मात्रै रहेको आचार्यले बताए।
यो औसत संख्यामा एक संक्रमित व्यक्ति भाइरसमा पास हुने व्यक्तिहरूको संख्या हो। यो सबै ‘केसहरूको संख्या’ र ‘मृत्युदर’ सँग सम्बन्धित छ। यो विभिन्न देशहरुमा फरक छ।
पोल्यान्ड र स्पेनमा अहिले यो दर शून्य दशमलव ७ प्रतिशत, जर्मनीमा शून्य दशमलव ७१ प्रतिशत, बेल्जियममा शून्य दशमलव ८१ प्रतिशत, युकेमा शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत, फ्रान्समा शून्य दशमलव ८९ प्रतिशत, इटालीमा शून्य दशमलव ९५ र डेनमार्कमा १ प्रतिशत छ।
‘गएको १ वर्ष सुखद रहेन अहिले आएर पोजिटिभ संकेतहरु देखिएका छन्,’ पोल्यान्डको प्रेस्को सहरको अस्पतालका डाक्टर आचार्यले थपे, ‘मैले देखेसम्म युरोपमा धेरै कडाइका साथ मापदण्ड लगाइयो र भ्याक्सिन पनि दिन थालियो यसले राम्रो गर्‍यो।’
अहिले धेरै देशले भ्याक्सिन तीव्र रुपमा लगाइरहेका छन्। १ मेसम्म युरोपका धेरै देशले जम्मा जनसंख्याको थोरैमा २३ प्रतिशतदेखि बढीमा ५१ प्रतिशतसम्मलाई भ्याक्सिन लगाइसकेका छन्।
जब महामारी तीब्र रुपमा फैलियो यी देशले कडाइका साथ मापदण्ड लगाए। नागरिकले पनि नियम पूर्ण रुपमा पालना गरेसँगै सावधानी अपनाए। सरकारले आर्थिक राहत प्याकेज ल्यायो। जसका कारण सकारात्मक संकेत देखा परे।
गएको एक वर्ष युरोप कोभिडका कारण नराम्रोसँग थला पर्‍यो। आर्थिक रुपमा सम्पन्न र विकसित युरोपका धेरै देश अघिल्लो वर्ष ‘हटस्पट’ बने। युरोप महादेशमा मात्रै कोरोना संक्रमणका कारण अप्रिल २९ तारिखसम्म ६ लाख ७८ हजार ६५३ जनाको ज्यान गएको छ भने ३० लाख २९ हजारभन्दा बढी संक्रमित भए। आर्थिक रुपमा सारा युरोप चौपट रह्यो।
झन्डै एक वर्षपछि भने सकारात्मक संकेतहरु देखा परेका हुन्। युरोपका बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, इटाली लगायत देशमा सबैभन्दा धेरै असर पर्‍यो। तर, अहिले भने विस्तारै सामान्यतर्फ जनजीवन अग्रसर हुने प्रयासमा छ।
‘भ्याक्सिन लगाएपछाडि पुनः फैलने जोखिम कम हुन्छ। यद्यपि बुस्टर डोज आवश्यक हुन सक्छ,’ डा. आचार्यले भने, ‘म आशावादी छु समस्या खोप लगाएपछि समाधान हुनेछ तर, भविष्यमा के हुन्छ कसैलाई थाहा छैन !’
अप्रिल २१ देखि डेनमार्कको जनजीवनमा बदलाव आएको छ। बार, रेस्टुरेन्ट, विद्यालय, सुपरमार्केट लगायत खुलेका छन्। चहलपहल बढ्न थालेको छ। घरभित्र ५ जनाबाट बढाएर १० सम्म भेट्न पाइने भएको छ। बाहिर २० जनासम्म भेटघाट गर्न मिल्छ। २१ मेबाट घरभित्र २५ र घरबाहिर ५० जनासम्म जम्मा हुन पाइनेछ। त्यतिबेलासम्म ५० वर्ष भन्दामाथि उमेर समूहका व्यक्तिहरुले भ्याक्सिन लगाइसकेको अवस्थामा धेरै जसो मापदण्ड हटाइने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन्।
युरोप महादेशमा सबैभन्दा धेरै नेपालीहरुको बसोबास रहेको बेलायतमा कोरोनाविरुद्धको कडाइ खुकुलो बनाइँदै लगिएको छ। ‘यहाँ अहिले विस्तारै सबै खुल्दैछन्, चरणबद्ध रुपमा बजार, शैक्षिक संस्था खुलेका छन्, लन्डनमा रहेका पत्रकार श्याम लुइँटेलले भने, ‘भ्याक्सिन पनि तीब्र रुपमा लगाउँदै लगेको पाइएको छ, अब नर्मल लाइफ फर्किन्छ कि भन्ने आशा छ।’
बेलायतमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि कोरोनाले ठूलो क्षति पुर्‍यायो। ५० जनाभन्दा धेरैको ज्यानै गयो भने संयौं संक्रमित। बेलायतमा पूर्व गोर्खा लाहुरेको बाक्लो बसाइ छ। सबै गरेर झन्डै १ लाखभन्दा बढी नेपाली रहेको अडकल छ।
कोरोनाको ठूलो चपेटामा परेको युरोपेली संघ (इयु) को शक्तिशाली देश फ्रान्स पनि विस्तारै तंग्रिने प्रयासमा छ। पेरिस बस्ने पत्रकार अनुराधा पौडेलले ठाउँ र अवस्था हेरेर लकडाउन खुकुलो बनाउँदै गएको जानकारी दिइन्।
फ्रान्समा झन्डै ६ हजार नेपाली बस्छन्। ‘मे ३ बाट फ्रान्सभरि जान पाइन्छ, पहिला १० किलोमीटर भित्रमात्रै जान पाइन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘जुन १५ बाट सबैले भ्याक्सिन लगाउँदैछन्, जुन ३० बाट जनजीवन नर्मल हुने अपेक्षा छ।’
कोभिड महामारिको पहिलो चरणमा नराम्रोसँग थलिएको स्पेन पुरानै लयमा फर्किन् जुर्मुराएर लागेको छ। पत्रकार वसन्त रानाभाटले दिएको जानकारी अनुसार देशभर खोप अभियानले तीब्रता पाइरहेको बेला अप्रिल महिनामा मात्र ८० लाखभन्दा बढी डोज भ्याक्सिन लगाइएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।
जसका कारण कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्यामा कमी भएको विश्वास गरिएको छ। ‘अहिले अवस्था सामन्य बन्दै गएको संकेतसँगै सरकारले आउँदो सातादेखि आपत्कालीन प्रतिबन्धहरूसहित संकटकाल हटाउने तयारी थालेको छ,’ रानाभाटले भने। स्पेनमा करिव १० हजार नेपाली बस्छन्। ‘सयौंको संख्यामा नेपालीहरु संक्रमित भएपनि हालसम्म कोही पनि नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको छैन।’ अर्का पत्रकार कमल पराजुलीले जानकारी दिए।
अर्को शक्तिशाली देश जर्मनीको खबर पनि सकारात्मक उन्मुख छ। पत्रकार रमण पनेरुका अनुसार हाललाई विभिन्न प्राथमिकताका तहहरु निर्धारण गरेर खोप लगाउने काम भइरहेको छ भने जुन महिनाबाट जोसुकैले पनि लाउन पाउने व्यवस्था गरिने बताइएको छ। ‘काम गर्न जान र व्यायाममा कुनै रोकतोक छैन। मौसम घमाइलो भएका बेला मानिसहरु भौतिक दुरी कायम गरी खुलामा बसेको देख्न पाइन्छ।’ उनले भने। जर्मनीमा करिब साढे ८ हजार नेपाली रहेको बताइन्छ।
विगतको महामारी भुलेर अघि बढ्ने धाउन्नमा रहेको इटालीमा पनि अहिले विस्तारै मापदण्ड खुकुलो पारिदै छ। बार र रेस्टुरेन्टहरू खुल्दै छन्। धेरै जसो विद्यार्थीहरू स्कुलमा फर्किएका छन् र केही बाहिरी सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई अनुमति छ। इटालीमा बस्ने नेपाली डिउ गजमेरले वातावरण सहज बन्दै गएको जानकारी दिए।
युरोपेली संघको मुख्यालय भएको मुलुक बेल्जियममा लगाइएको कडाइ कम गरिँदै लगिएको छ। संक्रमण दर पनि अब क्रमश घट्दै गएको छ। ‘संक्रमितहरुको क्रमश घट्दो क्रमलाई खोपको परिणामले प्रभाव पारेको सम्बन्धित विज्ञहरुले बताएका छन्,’ बेल्जियमबाट पत्रकार डिल्ली अम्गाईंले जानकारी दिए। व्यवसायहरु खुला रुपमा बार्दली र बाहिरको हावा खेल्न सक्ने खुला स्थानमा राखेर रेस्टुरेन्ट बार चलाउन पाउने व्यवस्था छ। बेल्जियममा लगभग १५ हजार नेपालीहरुको बसोबास छ।
बेलायतपछि धेरै नेपाली रहेको युरोपेली देश पोर्चुगलको खबर पनि सकारात्मक सञ्चार गराउने खालको छ। लकडाउन अप्रिल मसान्तबाट हटेको छ। केही भेगमा रहेको बताइन्छ। ‘रेस्टुरेन्ट र बार खुलेका छन्। आवतजावत बाक्लो हुँदैछ,’ पोर्तुगलमा रहेका पत्रकार दिल निशानी र नेपाली समुदायका एक अगुवा पूर्ण विकले जानकारी दिए। अब अवस्था सामान्य हुने दिशामा गएको बताइन्छ। पोर्चुगलमा करिब ३० हजार नेपाली भएको अडकल छ। कोरोनाले नेपालीलाई पनि नराम्रोसँग असर पुर्‍यायो।
संसारकै सुन्दर देशमा गनिने स्विट्जरल्यान्डमा पर्यटकको चहलपह बढ्न थालेको छ। पत्रकार युवराज फुँयालका अनुसार संक्रमितको संख्या अप्रिल महिनामा केही कमी भएपछि स्विस सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा लगाएको नियमहरुमा केही खुकुलो गरेको छ। ‘लामो समयदेखि बन्द रहेका बार रेस्टुरेन्टका बाहिरी भाग गार्डेनहरु खुला गरिएको छ, घुमफिर सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘उच्च माध्यामिक विद्यालयको पढाइ सुचारु हुने भएको छ, खुला ठाउँमा कन्सर्ट लगायतका लागि १ सयजनासम्मलाई खुला गरिएको छ।’ स्विट्जरल्यान्डमा झन्डै १२ सय नेपाली रहेको अनुमान छ।
नर्वेमा पछिल्लो कोरोना घढ्दो क्रममा छ। पत्रकार सरला कट्टेलका अनुसार किन्डरगार्डेन, सार्वजनिक यातायात र खाद्यान्नका पसल खुला छन्। ‘दैनिक ११ सयसम्म पुगेको कोरोना संक्रमण अहिले २/३ सयको हाराहारीमा छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले १० जनासम्म भेला हुन पाइन्छ भने मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्छ।’ नर्वेमा करिब ३ हजार नेपाली छन्।
लकडाउन नगरी कोभिडविरुद्ध लडेको देश स्विडेनमा पछिल्लो समयमा संक्रमण दर घट्दो छ। ‘यहाँ त कहिल्यै लकडाउन भएन, रात्रिकालीन मनोरन्जनका क्षेत्रहरु बन्द छन्, अहिले संक्रमण घटिरहेको छ, अब समरमा सबै राम्रै हुने आशा छ,’ स्विडेनको नेपाली समुदायका एक अगुवा रामशरण ढकालले जानकारी दिए। स्विडेनमा झन्डै १५ सय जति नेपाली रहेको बताइन्छ।
यता, अस्ट्रियामा विस्तारै लकडाउन सकिएको छ। ‘मे महिनाबाट विस्तारै सबै खोल्दै लैजाने योजनामा सरकार रहेको बताइन्छ,’ पत्रकार रविचन्द्र भट्टराइले जानकारी दिए, ‘२४ मे बाट सबै अन्तरदेशीय रेलहरु पनि सुरु हुनेछ।’ अस्ट्रियामा लगभग १२ सय नेपालीहरु छन्, खासै असर परेको छैन।
संसारकै धेरै खुसी मानिस बस्ने नम्बर १ देश फिनल्यान्डमा पनि सकारात्मक सन्देश छ। ‘कोरोना संक्रमितहरुको संख्यामा विस्तारै कमी आउन थालेपछि गत अप्रिल १८ तारिखदेखि भने सरकारले अली खुकुलो नीति ल्याएको छ भने यही हप्ताको अन्तिम सम्ममा सरकारले धेरै प्रतिबन्धहरु हटाउने समाचार आइरहेका छन्।’ फिनल्यान्डमा रहेका पत्रकार सञ्जु काउचाले भने। त्यहाँ करिब ४ हजार जति नेपाली रहेको बताइन्छ।
उता, पोल्यान्डमा १० दिनदेखि संक्रमण ओरालो लागेको छ। सरकारले कोरोनाविरुद्ध खोपको दिने अभियान पनि तीब्र पारेको छ। ‘मे १ देखि २९ तारिखसम्म क्रमशः कोरोना नियन्त्रण गर्न जारी प्रतिबन्ध हटाउने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ,’ पत्रकार शेरबहादुर परियारले भने। पोल्यान्डमा झन्डै ६ हजार नेपाली भएको बताइन्छ।
युरोपको अर्को देश नेदरल्यान्डमा पनि अहिले लकडाउन र कर्फ्यू हटेको छ भने सामाजिक दुरी कायमै छ। पत्रकार द्रोण रिजालले भने, ‘समर सुरु भएसँगै मापदण्डहरु खुकुलो पारिएको छ।’ त्यहाँ झन्डै २ हजार जति नेपाली छन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २८, २०७८, १२:२५:००